Shirkii maanta ee golaha wasiirada Soomaaliya oo looga hadlay arrimo xasaasi ah (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shirkii maanta ee golaha wasiirada Soomaaliya oo looga hadlay arrimo xasaasi ah (SAWIRO)
Shirkan waxaa guddoominayay ra’iisul wasaaraha xukuumada Mudane Xasan Cali Kheyre, waxaana ugu horeyn looga hadlay ajande ka kooban soo dhoweyn, nidaamka iyo xeerararka shirarka golaha, diyaarinta xil la wareegida wasiirada cusub, qorshaha xukuumadu ku shaqeyn doonto, arrimaha amniga iyo abaaraha.
Ugu horeyn, ra’iisul wasaaraha oo furay shirka ayaa ku wargeliyay wasiirada in shacabku uga fadhiyo xukuumada howl adag oo hufan, loona baahan yahay in laga dhabeeyo rajada shacabka.
Ra’iisul wasaaraha ayaa faray golaha wasiirada cusub inay buuxiyaan Foom ay ku cadeynayaan in xubin kasta oo ka mid ah golaha uu waajibkiisa u guto si daacad ah, aamin ah, ayna soo bandhigaan macluumaad rasmi ah oo ku aaadan hantida gaarka ah, iyada oo la waafajinayo sharciga, si loo helo isla xisaabtan dhab ah.
Sidoo kale, ra’iisul wasaare Kheyre ayaa ku dheeraaday dhismaha wasaaradda gargaarka, wuxuuna xusay in xukuumadu muhiimad gaar ah siisay taakuleynta shacabka, isaga oo faray hay’addaha caalamiga, kuwa gudaha, hay’addaha dowliga, iyo dhamaamba shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan wasaaradan, si loo gaarsiiyo shacabka abaaruhu aafeeyeen gurmadka ay u baahan yihiin.
“Waxaan galnay marxalad cusub, waana inaan u diyaar garowno sidii shacabka loo gaarsiin lahaa, nabad, xasilooni iyo dib u heshiisiin” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha oo ka hadlayay shirka golaha.